Madaxweynaha JFS oo maanta jeedinaya khudbadda munaasabadda 1da Luulyo | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta Madaxweynaha JFS oo maanta jeedinaya khudbadda munaasabadda 1da Luulyo
Madaxweynaha JFS oo maanta jeedinaya khudbadda munaasabadda 1da Luulyo
iyadoo weli lagu guda jiro todabaadka xorriyadda ayaa madaxweynaha JFS mudane Maxamed Cabdullaaii Farmaajo waxaa lagu wadaa in maanta uu jeediyo khudbadda munaasabadda kowda Luulyo oo maanta ku beegan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa la filayaa in uu khudbadiisa uu diiradda ku saaro arrimo ay kamid tahay muhiimadda xuska maalmaha xorriyadda.
Dhanka kale Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ka qeyb galay munaasabad lagu xusayey 60-guurada ka soo wareegtay Xornimada Gobolada Koonfureed iyo Midnimada dalka ee 1-da Luulyo,taasi oo ka dhacday madaxtooyada Soomaaliya.
Sidoo kale munaasabadda waxaa ka qeybgalay guddoomiyaha golaha shacabka mudane Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan,guddoomiye kuxigeenka 1aad ee golaha Shacabka Cabdiwali Ibraahim Sheekh Muudey,kusimaha ra’iisul wasaaraha ahna ra’iisal wasaare xigeen Mahdi Maxamed Guuleed,Mowliid Xuseen Guhaad guddoomiye xigeenka 2aad ee golaha Aqalka sare,guddoomiyaha Maxkamadda Sare Baashe Yuusuf Axmed,wasiirro,xildhibaanno,saraakiil iyo martisharaf kale.
Maqaal horeWasaarada Waxbarashada XFS oo shaacisay waqtiga uu Bilaabanayo Imtixaanka Shaadiga ee dugsiyada Sare
Maqaal XigaMagaalada Gaalkacyo oo lagu qabtay xuska 1-da Luulyo